Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » I-Boeing yokwakha uhlobo olutsha lwedrone e-Australia
Airlines • isikhululo • Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • iindaba • abantu • Technology • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukunyaniseka uWingman yinqwelomoya yokuqala yokulwa eyenzelwe ukuyilwa e-Australia kwisiqingatha senkulungwane. I-Boeing Australia okwangoku iphuhlisa iinqwelomoya ezintandathu ngokubambisana noMkhosi woMoya waseRoyal Australia.
I-Boeing ityhile izicwangciso zokwakha uhlobo olutsha lweenqwelomoya zomkhosi wenqwelo moya e-Australia.
Idrone entsha yomkhosi ka-Boeing isebenzisa ubukrelekrele bokusebenza ukuze isebenze ngokuhambelana neenqwelo moya.
I-Boeing ikhethe isixeko saseToowoomba eQueensland njengendawo yokugqibela yendibano yeenqwelomoya ezingamiselwanga zeLoyal Wingman.
Inqwelo moya enkulu yaseMelika iBoeing ibhengeze ukuba icwangcisa ukwakha inqwelo moya yayo entsha engamiselwanga eLoyal Wingman e-Australia.
Ngokuka-Boeing, ikhethe isixeko saseToowoomba kwiphondo laseQueensland njengendawo yokugqibela yendibano yohlobo lwayo olutsha lwenqwelomoya yomkhosi wenqwelomoya. Iindiza zokuqala zovavanyo zigqityiwe ekuqaleni kwalo nyaka.
Isibhengezo siza emva kweveki emva kokuba i-United States, i-United Kingdom ne-Australia zibhengeze a umanyano olutsha lokhuseleko eya kubonelela iAustralia ngeenkwili ezisebenzisa amandla enyukliya. Isivumelwano sigwetywe yi China kwaye sonyusa uxinzelelo kwingingqi ye-Indo-Pacific.
Ngoku ka iBoeing Ukhuselo lwase-Australia, ukukhula kweenqwelomoya ezintsha kuya ngokwesicwangciso. I-UAV entsha isebenzisa ubukrelekrele bokusebenza ukuze isebenze ngokubambisana neenqwelomoya ezenziwe ngabantu kwaye yakhulelwa, yoyilwa yaphuhliswa e-Australia.
Yinqwelomoya yokuqala yokulwa eyenzelwe kwaye yenziwe e-Australia kwisiqingatha senkulungwane. IBoeing Ostreliya Okwangoku uphuhlisa iinqwelomoya ngenqwelomoya kunye neRoyal Australian Air Force.
Akukho odolo ziqinisekisiweyo okwangoku, utsho iBoeing, kodwa urhulumente wase-Australia ubonakala ezithembile kwaye onwabile malunga namandla kaLoyal Wingman.
Idrone entsha iya kwakhiwa kwiziko elise-Wellcamp Airport, eliphantsi kweWagner Corporation.
Usihlalo kaWagner uJohn Wagner uthe unethemba lokuba indawo yokhuselo kunye nenqwelo moya kwisikhululo seenqwelomoya iya kutsala iinkampani ezininzi kwiindawo ezifanayo.
Iprojekthi kulindeleke ukuba idale imisebenzi engama-300 ngexesha lokwakha eli ziko kunye nezithuba ezingama-70 eziqhubekekayo zokusebenza nezokuvelisa.
INkulumbuso kaRhulumente waseQueensland u-Annastacia Palaszczuk uthe isibhengezo "ziindaba ezimnandi" kwaye imele ixesha lokuqala iBoeing iseke indawo enje ngaphandle kweMntla Melika.